InviZible Pro: Uhlelo lokusebenza lwe-Android lobumfihlo nokuvikeleka ku-inthanethi | Kusuka kuLinux
Ukufaka kwe-Linux Post | 04/09/2021 06:00 | Kubuyekezwe ku- 31/08/2021 23:04 | Android, Aplicaciones
Kusukela, asijwayele ukushicilela mayelana izinhlelo zokusebenza zamahhala noma ezivulekile for the Uhlelo lokusebenza lwe-Android, namuhla sizokhuluma eyodwa esikholwa ukuthi ilusizo kakhulu ebizwa "InviZible Pro".
"InviZible Pro" ngumthombo wesicelo omnandi omncane ovulekile ovumela ukuthi sigcine i- ubumfihlo be-inthanethi, ivikela amadivayisi wethu weselula kumasayithi ayingozi igwema ukulandelela lapho upheqa yabo. Nezinye izinto ezimbalwa.
Ngaphambi kokuntywila esihlokweni se- "InviZible Pro", sincoma ukuhlola ezinye okuthunyelwe kwangaphambilini okuhlobene con I-Android ne-GNU / Linux. Futhi ngalokhu ungachofoza kulezi zixhumanisi ezilandelayo ezibekwe ngokushesha ngezansi, ngemuva kokuqeda ukufunda le ncwadi yamanje:
"I- «Google», esinye sezidlakela zobuchwepheshe zeqembu le- «GAFAM», yenze i- «Android» yaba uhlobo lwenkundla yokuzikhangisa kanye nezinsizakalo zayo, okuvame ukufakwa kokuhlangenwe nakho okubi ngokwezinqubomgomo noma ukwehluleka kwezokuphepha nobumfihlo okhathazekile. Okwenzile, ukuthi ezinye izindlela zamahhala ezisuselwa ku- "Android" noma i- "Linux" uqobo, noma ezinye, zivele ngokuhamba kwesikhathi, ukuze kuzuze bonke." I-Android ene-Google noma engenayo: I-Android yamahhala! Iziphi ezinye izindlela esinazo?
1 I-InviZible Pro: Uhlelo lokusebenza lomthombo ovulekile lobumfihlo nokuphepha
1.1 Yini i-InviZible Pro?
1.3 Kungani kungakuhle ukusebenzisa lolu hlelo lokusebenza?
I-InviZible Pro: Uhlelo lokusebenza lomthombo ovulekile lobumfihlo nokuphepha
Yini i-InviZible Pro?
Ngokusho kwe- Iwebhusayithi esemthethweni de "InviZible Pro", ichazwa kafushane njenge:
"Uhlelo lokusebenza le-Android lobumfihlo nokuphepha online. Lokho kugcina ubumfihlo, kuvikela amadivayisi kumasayithi ayingozi, kuvimbela ukulandela umkhondo, futhi kutholakale ukufinyelela kuzinsizakusebenza eziku-inthanethi ezivinjiwe. Ngaphezu kwalokho, kufaka phakathi amamojula aziwa ngokuthiwa I-DNSCrypt, I-Tor y Uphephuli I2P, nayo engumthombo ovulekile. Okusetshenziselwa ukufeza ukuphepha okuphezulu, ubumfihlo nokusetshenziswa okunethezekile kwe-Intanethi."
Kamuva, yabo onjiniyela Nweba kuso, ukuthi:
"Amamojula we-DNSCrypt, Tor and Purple I2P wonke angasetshenziswa ndawonye noma asebenze / ahlelwe ngokwahlukana, kungaba okukodwa noma okubili ngasikhathi. Ngakho-ke, ukunikela inhlanganisela ekahle yamandla evumela indlela engcono yokufeza ukusetshenziswa okunethezekile nokuphephile kwe-Intanethi."
Kuye isigaba esisemthethweni ku-Android Store, fingqa ububanzi bayo izici noma ukusebenza Ngokulandelayo:
Akudingi ukufinyelela kwezimpande.
Ifihla indawo ne-IP yomsebenzisi.
Vulela okuqukethwe kwewebhu okunomkhawulo.
Ivumela ukufinyelela kumanethiwekhi afihliwe.
Isiza ukutholwa kokukhishwa kwe-ARP.
Kuza ngaphandle kwezibalo futhi ngaphandle kokukhangisa.
Kufaka ingqikithi yedizayini ebalulekile.
Kungani kungakuhle ukusebenzisa lolu hlelo lokusebenza?
Kuye isiza esisemthethweni ku-GitHub, abathuthukisi bayo bachaza lokho "InviZible Pro" kungcono kunezinye izinhlelo zokusebenza ezifanayo, ngoba:
Ayinabancintisani, okungukuthi, azikho izinhlelo ezifanayo noma ezifanayo.
Ukuphela kohlelo lokusebenza olunikeza ukusetshenziswa okusebenzayo kwe-DNSCrypt ku-Android.
Imvamisa izinzile kakhulu kunohlelo lwe-Orbot, olusebenzisa futhi inethiwekhi yeTor.
Kusebenza kakhulu kuneklayenti elisemthethweni le-Purple I2P.
Ikuvumela ukuthi ulungiselele kalula futhi kalula ukuthi imaphi amasayithi nezinhlelo zokusebenza ezizovula ngeTor, ngokungaziwa noma ukugwema ukuvimba.
Kwenza kube lula ukuguqula idivayisi yeselula noma i-Android TV set-top box ibe yindawo evikelekile yokungena ye-WiFi, engasetshenziswa noma iyiphi ifoni, ngaphandle kokufinyelela kwezimpande.
Ine-interface elungiselelwe ama-decoders.
Ingena esikhundleni sama-VPN ahlukahlukene namanye amathuluzi obumfihlo nokungaziwa.
Ihlanganisa ngempumelelo izici ze-DNSCrypt, Tor, ne-Purple I2P.
Futhi ngokusobala, kuthanda ukuba ngumthombo okhululekile futhi ovulekile.
Ngamafuphi, kusukela "InviZible Pro" kuyajabulisa uhlelo lokusebenza lomthombo ovulekile futhi mahhala esivumela ukuthi sigcine okwethu ubumfihlo be-inthanethi, ivikela amadivayisi wethu weselula kumasayithi ayingozi igwema ukulandelela lapho upheqa yabo. Futhi ngaphezu kwalokho, kusivumela ukufinyelela kuzinsizakusebenza eziku-inthanethi ezivinjiwe kwezinye izindawo zomhlaba, lapho singazithola khona. Kuyinto lokusebenza enhle kakhulu okufanele ibe yiyo ihlolwe futhi yanconywa.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Android » I-InviZible Pro: Uhlelo lokusebenza lwe-Android lobumfihlo nokuvikeleka ku-inthanethi